Ndị njem nlegharị anya Malta nabatara mbido Malta Michelin Guide
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Ndị njem nlegharị anya Malta nabatara mbido Malta Michelin Guide
Awards • Na-agbasa News Travel • culinary • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
MTA Na-anabata Mwepụta nke Malta Michelin Guide
Taa, Michelin malitere Malta mbụ Michelin Guide ma kwupụta ndị mmeri nke kpakpando mbụ Michelin na agwaetiti ahụ. Ihe nlere ohuru Michelin Guide gosiputara ulo akwukwo ndi puru iche, uzo di iche iche na nri ndi ozo di na Malta, Gozo, na Comino. E guzobere Michelin na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu, ihe karịrị otu narị afọ na iri abụọ, wee mata ụfọdụ nri kacha mma n'ụwa.
N'ịbụ nke dị n'etiti Mediterranean, Malta na-eguzobe onwe ya dị ka ebe na-aga gastronomic nke na-enye nri dịgasị iche iche nke ọtụtụ mmepeanya mere ka agwaetiti Maltese bụrụ ebe obibi ha. N'ịchọ ịnakwere akụkọ banyere nri dịgasị iche iche dị ogologo nke agwaetiti ndị a, ndị Malta Tourism Authority (MTA) nọ na-akwado obodo, na-adigide gastronomy nke na-atụnye okpu ya na usoro ọdịnala n'ime ọnọdụ ụlọ oriri na ọ modernụ modernụ nke oge a na nke na-agba agba.
Ndị mmeri nke kpakpando mbụ e nyere na Malta bụ:
• Noni - Onye isi nri Jonathan Brincat
• N'okpuru ọka - Chef Victor Borg
Minister for Tourism and Consumer Protection Julia Farrugia Portelli kwuru, sị: “Onyinye nke mbụ Michelin kpakpando na Maltese ụlọ oriri na ọ isụ isụ bụ ihe ọzọ nweta nke Malta nke bụ nnọọ na akara na Gọọmenti na ebumnobi nke na-adọta elu emefu njem na afọ ndị na-abịa. Gastronomy abụrụla akụkụ dị mkpa nke ụdị ahụmịhe nke onye njem nke onwe ya na-achọ taa.
Onye isi oche nke Njem nlegharị anya nke Malta Authority, Dr. Gavin Gulia, kwukwara, sị: 'MTA na-anabata mbipụta mbụ nke Malta Michelin Guide nke na-egosi ọbịbịa nke afọ nke ụlọ oriri na ọ ourụ ourụ anyị dị mma. Iri nri bụ akụkụ bụ isi nke ahụmịhe ezumike ọ bụla, yana mmụba na-eto eto n'ihe niile metụtara nri, ọ na-adịwanye mkpa maka Malta iji jigide ụkpụrụ dị elu na onyinye gastronomic ya. Inwe ntọala mbụ Michelin star na Island bụ n'ezie a nzọụkwụ na ụzọ ziri ezi.
Onye isi ala nke Michelin na-eduzi Gwendal Pullennec gosipụtara obi ụtọ ya ịmalite ngalaba Maltese mbụ, na-asị, 'Ọnọdụ nri Maltese nwere onyinye ndị ruru eru site na ndị na-eri nri si gburugburu ụwa. N'etiti Mediterenian, Malta bụ ebe ọdịbendị mara mma nke nwere ụdị nri pụrụ iche nke na-agwakọta mmetụta ndị Europe na ọdịnala mpaghara.
Iji lelee nhọrọ zuru oke nke ụlọ nri ndị a kpọrọ na Malta Michelin Guide online, biko gaa na: http://guide.michelin.com